Drone လေယာဉ်မှူးတိုင်းသိသင့်သောအချက် ၁၀ ချက်အပိုင်း ၁၀ စာမေးပွဲ NAB သတင်းများ | 10 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » audio » 10 အရာတိုင်းသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေယာဉ်မောင်းသည့်အပိုင်း 107 စာမေးပွဲအကြောင်းကိုသိရှိရမည်
ဒါကြောင့်သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးများ၏ကြီးထွားလာရာထူး join ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
သို့သော်စာမေးပွဲဖြေဆိုများသောအားဖြင့်ကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ် piloting မှကြွလာသောအခါအကြောင်းကိုစကားပြောမဟုတ်ကြောင်းအထူးပြုအသိပညာတစ်ခုအိမ်ရှင်ပါရှိသည်။
1 ။ အသက်အရွယ်နှင့်ကာယ / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ
တစ်ဦးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်စုံလင်သည် - သင်ကအနည်းဆုံး 16 နှစ်ရှိပြီဖြစ်နှင့်ဓာတ်ပုံဖော်ထုတ်ခြင်း၏ခိုင်လုံသောပုံစံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုမောင်းမထားဘူးဆိုရင်, တစ်ဦး State-ထုတ်ပေးမှတ်ပုံတင်ကဒ်လည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအပြင်, သင့်အချက်အလက်များ၏အားလုံးမှန်ကန်စွာစာလုံးပေါင်းသည်ကိုသင်စာမေးပွဲဖြေဖို့လျှောက်ထားကတည်းကပြောင်းလဲသွားတယ်မရှိသေးပေကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သို့သော်များစွာသောမသန်စွမ်းလူဦးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ piloting သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပြည့်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ခြမ်း Gig ရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းကြောင်းရှာတွေ့နေကြပါတယ်။ စနစ်တကျထိန်းချုပ်မှု operating နှင့်မျက်မှောက်တဦးတည်းရဲ့အမြင်လိုင်း (VLOS) အတွင်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမဆိုလေယာဉ်မှူးရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးဘီးတပ်ကုလားထိုင်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကအဆိုပါ FAA စိတ်ထဲမထားဘူး။
2 ။ အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုအရေးကြီး Are
သင်က Proctor နှင့်စမ်းသပ်နားမလည်ကောင်းစွာအလုံအလောက်အင်္ဂလိပ်နားလည်ပေးနိုင်ရပါမည်။ သင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်တန်းတူမှတက်မပါရှိလျှင်, စာမေးပွဲကြိုးစားနေမတိုင်မီသင်၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုပေါ်တက်တိုက်။
သင်စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်ထောက်ပံ့ပေးလေ့လာမှုပစ္စည်းများနှင့်နမူနာမေးခွန်းများကိုနားလည်လျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်၏အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုလုံလောက်ဖြစ်သင့်သည်။ စမ်းသပ်မှုအတော်လေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသည်နှင့်အမျှကောင်းစွာဇာတိအင်္ဂလိပ်စပီကာအဘို့အခက်ခဲနိုင်ပါတယ် - ဒါပေမယ့်အဆင်သင့်ရှိပါစေ။
3 ။ ခရီးသွား, ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လေ့လာအချိန်
သင်တစ်ဦးမှာ $ 150 ကတိကဝတ်လုပ်နေပါတယ်ကတည်းက FAA-approved စမ်းသပ်ခြင်းစင်တာသငျသညျကျိန်းသေလေ့လာချင်တယ်။ ကောင်းစွာလေ့လာတယျ။
အမှန်တကယ်စာမေးပွဲဖြေဆိုလူအများစုဟာလေ့လာမှု 15 သို့မဟုတ် 20 နာရီဝန်းကျင်အတွက်ချပြီးနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုရက်သတ္တပတ်ကသူတို့စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်ရက်စွဲမတိုင်မီလေ့လာနေ start စသည်တို့ကိုစည်းမျဉ်းများ, စစ်ဆင်ရေး, ရာသီဥတုသက်ရောက်မှုနှင့်အစီရင်ခံစာများ, ဇယားများနှင့်မြေပုံများအားအမျိုးမျိုး, ဖုံးလွှမ်း။
သင်၏အချိန်သင့်ရဲ့ကြိုတင်အသိပညာနှင့် / သို့မဟုတ်ဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာသင်သတင်းအချက်အလက်သိမ်းသွင်းပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။
4 ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတွင်ကဘာလဲ?
သင်က 60-မေးခွန်းတစ်ခုကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးစီးရန်နှစ်နာရီရပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့ကိုအနည်းငယ်အသက်ရှူအခန်းထဲမှာပေးသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးကသွားတာရမှတ်သာ 70% ဖြစ်ပါတယ်။
5 ။ အလေ့အကျင့်မေးခွန်းလွှာ၏တစ်ဦးကလင်မယား
အဆိုပါခဲအမြင်အာရုံလေ့လာသူ, client ကိုသို့မဟုတ်တာဝန်ခံအတွက်ဝေးလံသောလေယာဉ်မှူး - သင့်လျော်သောအရေးပေါ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆက်သွယ်တာဝန်ရှိသူသည်စီးပွားဖြစ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေယာဉ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်?
အတန်းအစား: D, Class C သို့မဟုတ် Class B - လေပိုင်နက်၏အဘယျအတနျးဇယားပေါ်တွင်အပြာဒက်ရှ်ကဝိုင်းလေဆိပ်နှင့်ဆက်စပ်သလဲ?
(အဖြေ: Class ကို: D)
ဤရွေ့ကားမေးခွန်းနှစ်ခုနဲ့အခြားအလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုကနေအဆင်ပြေအောင်ခဲ့ကြပေမယ့်အရိပ်အယောင်ကိုသင်စည်းမျဉ်းများ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်မြေပုံ / ဇယားစညျးဝေးကွီး acute သတိထားဖြစ်သင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
6 ။ ဤသည်မှာအချက်အလက်အားလုံးထိရောက်စွာ Operating မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
အချိန်ကြာမြင့်စွာပျံသန်းခဲ့ကြသူအတော်များများဟာလေယာဉ်မှူးဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးအဖြစ်လိုအပ်သောအသိပညာအချို့ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်လာသောအခါဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသင်ဤအချက်အလက်များ၏ acute သတိထားပါရန်အဘို့သင့်နှင့်သင့် client များ '' အကျိုးရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အလားအလာ client ကိုသငျသညျ, တစ်ဆဲလ်ရဲတိုက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဟာသူတို့ရဲ့မွေးမြူရေးရုမ်းမင်းသည်အဘယ်မှာရှိတွေ့မြင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ cornfields ထွက် map မှတိကျတဲ့ဧရိယာကျော်ပျံသန်းဖို့လိုလားတယ်ဆိုရင်ဥပမာ, သငျသညျ (နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်သုံးပြီး) ထို client ကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်သင်သည်ရှိမရှိ ကျော်ပျံသန်းသို့မဟုတ်မ, သို့မဟုတ်သင်လေယာဉ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရန်လိုအပ်မည်ဆိုပါကနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ client ကိုသူတို့ကမျှော်စင်, မွေးမြူရေး, ဒါမှမဟုတ်မြေယာပိုင်ဆိုင်လျှင်ပင်ထိုမေးခွန်းကိုမဖြေနိုင်။
နှင့်သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင် client ကိုကအဆင်ပြေကြောင်းကိုသင်ပြောပြရန်ကြိုးစားလျှင်, သင်, ဖြစ်နိုင်သည်သင့်ရဲ့လိုင်စင်ကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်သူတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ဒဏ်ရိုက်ခံရ, ဒါမှမဟုတ်ပင်မှားအကွာအဝေးအတွင်းလေပိုင်နက်၏မှားယွင်းတဲ့လူတန်းစားအတွက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်ထောင်ဒဏ်အချိန်နည်းနည်းဖြုန်း ။
7 ။ အဘယ်မှာနောက်ထပ်အကူအညီကိုရယူပါရန်
အမျိုးမျိုးသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဆိုက်များထို့အပြင် FAA အတော်ကြာစာပမြေားရှိပါတယ် ဒီမှာ သင်စတင်ရန်ကူညီရန်အသုံးပွုနိုငျသော။ အဲဒီမှာတဆင့်ဖတ်ရှုဖို့နံပါတ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်သို့သော်သင်စာမေးပွဲဖြေဆိုတစ်ရက်န်းကျင်မိတ်ဆက်လာသောအခါမျှော်လင့်သောအရာကိုကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းစမ်းသပ်လမ်းညွှန်နှင့်အလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေအများကြီးပါဝင်သည်။
8 ။ အဘယ်အရာကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဖွစျသှား?
သင့်အနေဖြင့်စမ်းသပ်ယူပြီးပြီးနောက် (တနင်္ဂနွေအပါအဝင်မဟုတ်) အကြောင်းကို 48 နာရီအတွင်းသင့်ရဲ့ရမှတ်ကိုလက်ခံရရှိသင့်ပါတယ်။
သငျသညျလွန်လျှင်, သင်ထို့နောက် FAA ရဲ့ site အားဖြင့်သင်တို့၏ဝေးလံသောလေယာဉ်မှူးလက်မှတ်လျှောက်ထားနှင့်သင့်ယာယီလက်မှတ်ရယူနိုငျပါသညျ။ သင့်ရဲ့အမြဲတမ်းလက်မှတ်မေးလ်မှတဆင့်လှေတျတျောမူပါလိမ့်မည်နှင့်ရောက်လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်။
9 ။ အဘယ်အရာကိုငါစမ်းသပ်မှုမအောင်မြင်ပါလျှင်?
သငျသညျကိုအနည်းဆုံး 14 ရက်ပေါင်းယခင်တဦးတည်းပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုပြန်လည်ယူနိုငျသညျ, မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အဆိုပါ Two-တပတ်စောင့်ဆိုင်းကာလသင်ဒုက္ခပေးသောထိုဒေသများလေ့လာဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, သင်ပြန် $ 150 အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်, ထို့ကြောင့်သင်လွဲချော်သိကျွမ်းခြင်းပညာရရှိခဲ့ကြပြီသေချာစေမည်။
10 ။ သငျသညျ Recertify ရန်လိုအပ်မည်
အားလုံးဝေးလံသောလေယာဉ်မှူးတိုင်းနှစ်နှစ် recertify ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက်ချုံး၏အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှုရှိကွောငျးဒါကြောင့်သင့်လက်ရှိတဦးတည်းထွက်ပြေးရှေ့၌သင်တို့ recertification ကောင်းစွာအချိန်စာရင်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်အပိုင်း 107 စာမေးပွဲတွင်ယူချင်သည့်အခါမျှော်လင့်ထားအဘယ်သို့ကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးပေးသင့်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း FAA ရဲ့ကျယ်ပြန့်အသိပညာအခြေစိုက်စခန်းနှင့်၎င်းတို့၏မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများထုတ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။ ဒီလမ်းညွှန် သင်တို့ကိုလည်းစာမေးပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပျံသန်းသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူသွားပုံကိုတစ်ခု ပို. ပင် In-depth စိတ်ကူးကိုငါပေးမည်။
မာကု Sheehan စတင် အကြှနျုပျ၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အာဏာပိုင် သိပ္ပံအတတ်တော်အားမျှဝေခြင်းနှင့်လူဦးကဤအံ့သြဖွယ်ဝါသနာနှင့်အလုပ်အကိုင်ထဲကအများဆုံးရကူညီပေးဖို့။
ယခင်: ပလက်တီနမ်Tools® 45 NAB Show မှာ MapMaster ™ mini ကို RJ2019 Pocket Cable ကိုစမ်းသပ်လွှတ်တင်